သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာဆာဗာကို Cloud တွင်ကိုယ်ပိုင် OwnCloud | Linux မှ
သင့်ကိုယ်ပိုင် Cloud server ကို OwnCloud ဖြင့်ဖန်တီးပါ
ဟွမ် ၎င်းသည် application ဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ဆော့ဝဲ ဒါကမင်းကိုဖန်တီးခွင့်ပေးလိမ့်မယ် ဖိုင်ဆာဗာ ထဲမှာ မိုဃ်းတိမ်ကိုသင်၌ကုန်လှောင်ရုံတစ်ခုရှိနိုင်သည် ပုံရိပ်, စာရွက်စာတမ်းများ ဒါမှမဟုတ်မင်းတောင်မှ ဂီတ, ဒေတာ မည်သည့်နေရာမှမဆိုအင်တာနက်နှင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။
စာဖတ်သူတော်တော်များများကသေချာပေါက်သိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့သည် Cloud ၌ဖိုင်သိုလှောင်ရေးနည်းလမ်းများကို UbuntuOne, Dropbox သို့မဟုတ် SpiderOak ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်သုံးလိမ့်မည်၊ ၎င်းတွင်သင်၏ဓာတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တေးဂီတကိုသင်မည်သည့်နေရာမှမဆိုရယူနိုင်သည်။ အင်တာနက်နှင့်အတူကွန်ပျူတာ။
ကောင်းပြီ, သို့သော်ယခုပြproblemနာကဤ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အဓိကကန့်သတ်ချက်သည်နေရာလွတ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အခမဲ့အကောင့်များပေးသည်။ သို့သော်သိုလှောင်မှုနေရာ ၂ မှ ၅ GB အထိရှိသည်။ ။ ကျွန်ုပ်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အရေးကြီးဆုံးသောအခြားအရေးကြီးသည့်အချက်မှာသီးသန့်တည်ရှိမှုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်ငွေရှာရန်ဖန်တီးကြပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့အားမောင်းနှင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဒေတာကိုအမြင့်ဆုံးလေလံသို့ပင်ရောင်းချနိုင်သည်။ ဤကုမ္ပဏီများမှဒေတာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်တည်ဆောက်ထားသော application များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲမဟုတ်ပါ။
ကံကောင်းတာကအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တစ်ခုနှင့်ဒေတာများကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုအပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသော application တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် OwnCloud အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲမှများမှာ:
ကောင်းမွန်ပြီးလွယ်ကူတဲ့ web interface တစ်ခု
ပြက္ခဒိန် / အစီအစဉ်
သင်၏ဖိုင်များကို WebDAV မှတစ်ဆင့်ရယူခြင်း
အကယ်၍ ၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့သိုလှောင်မှုပမာဏသည်သင်၏ hard drive ပေါ်တွင်သင်ရရှိနိုင်သောနေရာမှသာကန့်သတ်လိမ့်မည်။
သင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သော Cloud တွင် data server ရှိလိုပါသလား။
ဤလမ်းညွှန်သည် Debian Squezee နှင့် Ubuntu ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Apache ဆာဗာနှင့် MySQL ဒေတာဘေ့စ်မန်နေဂျာကိုတပ်ဆင်ပြီးလည်ပတ်ရမည်။
1.- မှီခို Install လုပ်ပါ
2.- MySQL ဖြင့်ဒေတာဘေ့စ်ဖန်တီးပါ
terminal တွင်အောက်ပါ command ကိုသုံးသည်။
mysql -u အမြစ် -p
ထို့နောက် mysql command line ပေါ်လာလိမ့်မည်။
mysql> database name_of_our_database ဖန်တီးပါ။
ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။ OK ကို ၁ လထိထိခိုက် (1 sec)
3.- Owncloud ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ ဖြည်ချပါ
package ကို download လုပ်တယ် owncloud-x.tar.bz2 နောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည် unzip လုပ်သည်။
ကတ္တရာစေး -xvf owncloud-x.tar.bz2
4.- owncloud လမ်းညွှန်ကို Apache ဆာဗာသို့ root အဖြစ်ကူးယူပါ
5.- web server ခွင့်ပြုချက်များကို owncloud လမ်းညွှန်သို့ပေးသည်။
-R www- ဒေတာကိုပြသ: www- ဒေတာ owncloud
6.- ကျွန်ုပ်တို့၏ Apache ဆာဗာကိုပြန်လည်စတင်သည်။
7.- Installation ပြီးအောင်လုပ်ပါ
ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏လိပ်စာတန်း မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ထည့်ပါ။
ip.de.tu.server / owncloud (အကယ်၍ သင်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိအခြားကွန်ပျူတာမှသုံးလျှင်)
localhost / owncloud (အကယ်၍ ကိုယ်ပိုင်cloudတပ်ဆင်ထားသည့်ကွန်ပျူတာမှသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက)
ပြီးရင် Installation ပြီးအောင် Web Interface ပြပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့က administrator account တစ်ခုဖန်တီးပြီး "Advanced" option ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက် database ၏ username၊ database အမည်နှင့် password ကိုထည့်ပြီး“ Complete installation” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ administrator အကောင့်အတွင်းသို့ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ဆောင်မှုကို configure လုပ်၍ အသုံးပြုသူများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အင်တာနက်မှ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် No-IP ကဲ့သို့သော DNS ၀ န်ဆောင်မှုရှိရမည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်တစ်ခုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ OwnCloud ဆာဗာကိုအင်တာနက်နှင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုလိပ်စာပါသည့်ဘရောက်ဇာကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တင်ပို့မည့်ဖိုင်များ၏အလေးချိန်မှာအလွန်နည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်းများရှာဖွေမည့် /etc/php5/apache2/php.ini ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဤပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အဆင်သင့်! ကျွန်ုပ်တို့သည် browser မှ http: //ip.del.servidor.owncloud/owncloud လိပ်စာသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်၎င်းတို့နှင့်အတူပါရှိသည့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကိုစတင်တင်သည့် web interface ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါ OwnCloud ဆာဗာ၏ဖန်သားပြင်အချို့ကိုချန်ထားပါ။
OwnCloud login မျက်နှာပြင်
PDF Reader သည် OwnCloud ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်
သင်၏ OwnCloud ဆာဗာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လမ်းညွှန်
OwnCloud သည် UbuntuOne၊ SpiderOak, Dropbox သို့မဟုတ်ယခုမကျေနပ်သေးသော Megaupload တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမဆို၏အင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့သည်။
နောင်တစ်ချိန်တွင် No-IP ဖြင့်ပြောင်းလဲနေသော DNS ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့်မည်သို့ပြသမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » သင့်ကိုယ်ပိုင် Cloud server ကို OwnCloud ဖြင့်ဖန်တီးပါ
71 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဂျူလီယို ရိုဒရီဂွက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
Julio Rodriguez ကိုပြန်ပြောပါ
ဆောင်းပါး။ သငျသညျကိုရည်ညွှန်းအရာအားလုံးကို (ငါကဲ့သို့) ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်
Cloud သိုလှောင်မှု, ဝဘ်ကိုလည်ပတ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်
Cloud သိုလှောင်မှု, ငါသည်သင် Facebook ပေါ်မှာ Cloud Personality ကိုလိုက်နာရန်အကြံပြုပါသည်။ အမှန်တရားကတော့သူနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပေးတယ်
သံသယ, က centos တစ်ဗားရှင်း install လုပ်နိုင်မည်နည်း
ငါ system ကိုအသုံးပြုသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဘယ်လိုနေလဲ၊ စီမံခန့်ခွဲသူကဘယ်လောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မလဲ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လိုဂိုတစ်ခုထည့်ချင်တယ်၊ Ubuntu မှာလည်းပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
အခြား application တစ်ခုသည် APT ကိုအသုံးပြုသောအခါဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆော့ဝဲစင်တာကိုသင်ဖွင့်သောအခါ၊ APT ကသော့ခတ်ပြီးဆော့ဝဲစင်တာမှသာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဖြေရှင်းဖို့ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့သင်ဖွင့်ထားတဲ့ APT ကိုသုံးတဲ့အခြားကိရိယာကိုပိတ်ဖို့ပဲ။
မရရှိလျှင် APT သည်မမျှော်လင့်ဘဲကြားဖြတ်ပြီးစနစ်တကျမပိတ်သောအခါဤအမှားလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ကျွန်တော့်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ E: Lock file "/ var / lib / dpkg / lock" ကိုဖွင့်လို့မရဘူး။ ဖွင့်တယ်။ (၁၃: ခွင့်ပြုချက်မရပဲ)
E: "var / lib / dpkg /" မှန်ဖိုင်ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး
terminal ထဲရှိအဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါ firefox address bar တွင် localhost / owncloud ကိုရိုက်ပြီးဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ၀ င်းဒိုးတစ်ခု (AeeLy7OT.phtml ဟုခေါ်သည်) ကိုရယူသည်။ ငါ download လုပ်ပြီးဖွင့်ပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး။ installation ကိုအပြီးသတ်ဖို့ browser ကိုဒီ window ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။
PS: Laszlo အတွက်အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့ input ကကျွန်တော့်ကိုကူညီခဲ့တယ်။
ကားလို့စ် Ernesto Pruna ဟုသူကပြောသည်
ငါဖိုင်တင်ပို့၏အရွယ်အစားတိုးမြှင့်များ၏ဘာသာရပ်အပေါ်သံသယရှိသည်! ပုံမှန်အားဖြင့် 512Megas တင်သည်ကိုဝန်ခံသည်။ ကျွန်ုပ် php.ini သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေးသောဂန္ထဝင် 2M နှင့်အတူရှိနေသည်။ သို့သော် အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကဤမေးခွန်းကိုမေးလာလျှင်ကျွန်ုပ်ကလေးစားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် owncloud ပြောနေသည်ကိုငါ ဆက်၍ တင်နေသည်။
Carlos Ernesto Pruna ကိုပြန်ပြောပါ
မိုးတိမ်ထဲ၌ပင်ကျွန်ုပ်ဘာအာမခံချက်မှမရနိုင်ပါ။ “ လက်တစ်ဖက်ကပိုကောင်းတဲ့ငှက်တစ်ကောင်၊ ပျံသန်းရာတစ်ရာထက်ပိုပြီး” ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ထားသည့် Disk ကြီးတစ်ခုဖြင့်ကောင်းသောကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။ 🙂
ငါ repositories ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်
Guillermo Linares နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
Guillermo Linares အားပြန်ပြောပါ
သင် terminal ထဲတွင်လုပ်ခဲ့သည့်အဆင့်များကိုထပ်မံစစ်ဆေးပါ၊ ဤသင်ခန်းစာကိုလိုက်နာပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မံပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ပထမဆုံး mysql နှင့် php ကိုသွင်းရမည်။ 🙂
အမှန်တကယ်တွင် OwnCloud သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏ hard drive တွင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည် Cloud Storage service ကဲ့သို့အခွင့်အလမ်းလည်းရှိသည်။ ၎င်း၏အမည်က "own cloud" ကိုညွှန်ပြသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အာမခံရှိပါက၎င်းတို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဒေတာသိုdiskမဟုတ်မိုးတိမ်သိုမဟုတ်သတင်းအခ»က်အလက်မ»ား»
မင်္ဂလာပါ၊ အလွန်ကောင်းသောသတင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည် "No-IP ပါ ၀ င်သည့် DNS ၀ န်ဆောင်မှု" ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မတူကွဲပြားသောဖိုင်များ၏ဗားရှင်းများကို dropbox ၌သိမ်းဆည်းထားသလား။
ဘယ်အချိန်မှာသင် dns server ကို configure လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအပေါ်သင်ခန်းစာ upload တင်ပါလိမ့်မယ်
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်စမ်းသပ်:
sudo ဝန်ဆောင်မှု mysql စတင်ပါ
ငါနဲ့တစ်ခြားနေ့တွေမှာငါနဲ့ထပ်တူတူပဲ။ ငါအဲဒီ့ command ကိုငါ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။ အမှားအတူတူပဲဖြစ်ခဲ့ရင်ငါမမှတ်မိတော့ဘူး။
ပိုပြီးအကြံပြုလိုတယ်သော apache များအတွက်မေးခွန်းတစ်ခု?
sudo aptitude install နှင့်အတူ repository မှ install လုပ်ပါ
သို့မဟုတ် apache စာမျက်နှာမှ၎င်းကို download လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်အလားတူပြproblemနာရှိနေသည်။ ဘရောင်ဇာမှ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည် owncloud ဖိုင်တွဲရှိ index.php ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သာခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ဖွင့်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဘာမှမပြပါ။ ။
တူညီတဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖြေရှင်းပြီးသူတစ်စုံတစ် ဦး က?
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလားအလွန်ကောင်းတဲ့စာစောင်၊ ငါစကားဝှက်တောင်းတဲ့အဆင့်မှာပဲနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းကစကားဝှက်ကဘာလဲ။ ငါ pc အတွက်ရသမျှကိုရိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရတယ်။
"ERROR 2002 (HY000): sv '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) မှတဆင့် local MySQL server ကို ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။ " ငါ့ SO ။ ၎င်းသည် Ubuntu ၁၁.၁၀ ဖြစ်သည်။
VirtualBox ပါသော Virtualized Oniric မှပြုလုပ်သည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ????
Apache ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ၊ ဤလိုင်းသည်အထူးသဖြင့်ပျောက်နေပုံရသည်
# apt-get install php5 ကိုသုံးပါ
ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာနဲ့နည်းပညာပြproblemsနာတွေကြောင့်စမ်းသပ်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါနဲ့ငါတွေ့တဲ့အရာကနေပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုငါပြောပြီးစမ်းကြည့်ပါ။ အဲဒါကသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာပြောပြပါ။
… Web configuration ကိုဝင်ပြီး NAT ဘာသာပြန်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ IP တစ်ခုတည်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သင်၏ PC များရှိ IP အားလုံးသည်သီးသန့်ဖြစ်သောကြောင့် router ၏ NAT ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသောလမ်းညွှန်တန်ဖိုးထားသည်! ဒါပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာ No-IP နှင့်အတူပြောင်းလဲနေသော DNS တစ်ခု?
တကယ်တော့ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့၊ ပထမဆုံးပြသနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါအံ့သြသွားတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုချက်ချင်းစာရင်းသွင်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !!!
ဟေ့ 😀မင်္ဂလာပါ၊ ပို့စ်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီခဲ့ပြီး၎င်းကို Arch * မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းများတွင်လည်ပတ်ရန်စီမံပြီးပါပြီ။ * Hahahaha ကောင်းပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် No-IP ပါ ၀ င်သည့်ပြောင်းလဲနေသော DNS ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၀ င်ရောက်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏ host ၏လိပ်စာသည်ကျွန်ုပ်၏ router D ၏စာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိသွားသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြင်ဆင်ရန်ကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အလွန်ကောင်းပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုရန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ mysql -u root -p ကိုအဆင့် ၂ တွင်ရေးသားသောအခါကျွန်ုပ် pass ကိုရေးသားပြီးသည့်နောက် terminal ထဲ၌ကျွန်ုပ်ရနိုင်သည်။ ERROR2(HY2002): Can /var/run/mysqld/mysqld.sock '(၂) local MySQL ဆာဗာကို socket မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပါ' ။
Laszlo demeter ဟုသူကပြောသည်
ဖြစ်နိုင်သည်မှာ mysql server သည်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ "sudo apt-get install mysql-server" ကိုအရင်စမ်းကြည့်ပါ
Laszlo Demeter အားစာပြန်ပါ
ဤပြwithနာ၏တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ "ultra geeks" အတွက်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်သောအချိန်နှင့်သိချင်စိတ်ရှိသူမည်သူမဆို၎င်းကိုကောင်းသောသင်ခန်းစာများဖြင့်ကြိုးစား။ အောင်မြင်နိုင်သော်လည်း၊ သူတို့သည်အချို့သောဆာဗာများကိုမလေ့လာခဲ့ကြပေ။ service သည် dynamic DNS ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုစတင်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် command များကိုကူးယူရန်နှင့်ကူးယူရန်ဖြစ်သည်ဟုမထင်သောမှတ်ချက်များစွာကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းသည်မှာထိုသို့မဟုတ်ပါ၊ မည်သူမဆိုပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းသင်ဖတ်ရန် အနည်းငယ်နားလည်သည်။
ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေး ၀ င်လိုပါကဆာဗာကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ထားသည့်စက်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ နောက်ဆုံးတွင်လျှပ်စစ်ဥပဒေမူကြမ်းသည်လကုန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးလိမ့်မည်။ နှစ်ကုန်မှာ UbuntuOne ကလိုချင်တဲ့သိုလှောင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတစ်နှစ်ကိုအားသွင်းနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲထွက်လာလိမ့်မယ်။
ကျနော့်အမြင်အရပြောရရင်ဒီဟာက "သွေးတွင်းသန္ဓေသား" တွေအတွက်၊ "ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်" ဖိုင်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သော privacy freaks များအတွက်သို့မဟုတ်ဆာဗာတစ်ခုတပ်ဆင်ပြီးသားနှင့်၎င်းအားလုံးမည်သို့ပင်ဖြစ်စေလည်ပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကုမ္ပဏီအသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်၍ ကုမ္ပဏီများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော် "ပုံမှန်" အသုံးပြုသူအတွက်မူ၎င်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။
ဆိုလိုသည်မှာအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်သည်၎င်းကိုအလိုရှိသူများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပရောဂျက်များဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပေးသောအလွန်ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆာဗာနှင့်မိတ်ဆွေများကိုသွားပြီးအထင်ကြီးစေရန်သာလျှင်လူတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ hehe ကိုထူထောင်ခဲ့သော်လည်းအနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်လက်တွေ့မကျသောအတားအဆီးများစွာကိုဆိုလိုသည်။
အတိအကျဆိုရသော်၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သင့်အားကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုရရှိရန်အတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသည်။ ငွေကြေးကုန်ကျမှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာအချက်အလက်များသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လုံခြုံမှုရှိသည်။ လုံခြုံရေးကိုသင်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ဘဲသင်ချထားသည်။ ဤပရိုဂရမ်အမျိုးအစားသည်မည်သူမဆို (geek တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ) အနည်းငယ်သောအားထုတ်မှုဖြင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုရနိုင်သည်။
Manuel Guirado ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux ကိုနှစ်ပတ်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်တစ်ဝက်သာအချိန်ယူပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြproblemsနာများစွာနဲ့ငါမပြီးဆုံးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုရှိတာပေါ့။ OwnCloud မှာ admin account admin မဖန်တီးနိုင်ဘူး၊ xDDD ကတော့ dumbest xDD
Manuel Guirado သို့ပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ ဤရွေးချယ်စရာသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ http://localhost/owncloud ကျွန်ုပ် PHP ဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်cloud login မျက်နှာပြင်မရပါ။ မှားယွင်းသောအဆင့်တစ်ခုကိုလုပ်မိပါ့မလားသို့မဟုတ်အမှီအခိုကင်းသောအမှားများရှိပါသလား။
Esteban: D ဟုသူကပြောသည်
သငျသညျဆာဗာကိုစတင်ရန်ရှိသည်။ အခြားနေရာမှ php ဖိုင်ကိုဖွင့်သကဲ့သို့သင်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်
Esteban D ကိုပြန်ပြောပါ
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် DIY နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းစနစ်များ - ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာလွတ်လပ်ပြီးလုံခြုံတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုတည်းသော🙂
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ ... ကောင်းသောအချက်အလက်နှင့်ကောင်းသော help..thanks
Alejandro Martinez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်း / ပြhaveနာရှိသည်၊ ဘာဖြစ်သွားသည်လဲ upload size ကိုပြုပြင်ရန်၊ ၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာများကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအပြည့်အစုံလိုင်းဖြတ်သန်းနိုင်ဒါမှမဟုတ်ဒီနှင့်အတူငါ့ကိုကူညီနိုင်လျှင်သိရန်လိုသည်
သင်ဖွင့်ရန်လိုသော်လည်း root အနေဖြင့်၊ [Alt] + [F2] ကိုနှိပ်ပြီး gksu gedit ကိုရိုက်ပါ
ထိုအခါ gedit သည်ကြီးကြပ်သူခွင့်ပြုချက်များဖြင့်သင့်အတွက်ဖွင့်လိမ့်မည်
၄ င်းကို root / admin အနေဖြင့်ဖွင့်လိုက်ရင်ဘာပြproblemနာမှမရှိပါဘူး။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီများစွာလိုအပ်သည်ကိုယုံကြည်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ server ကို linux တွင်တပ်ဆင်ပြီး no-ip ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဘယ်တော့မှ လက်ခံ၍ မရပါ၊ အမှန်မှာကျွန်ုပ်မအောင်မြင်သောအရာကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ဒါကြောင့်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် windows7၌ရှိသော်လည်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်၎င်းကို host ပြုလုပ်ရန်သင်ခန်းစာများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ၎င်းကို DHCP ရှိ mode သို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်မဟုတ်ပါ၊ IP လိပ်စာတစ်ခုနှင့်လည်းသော်လည်းကောင်း၊ အဖြေတစ်ခုကိုကျွန်တော်မတွေ့ပါ။ ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ဒီဂရီစီမံကိန်းပါ။ သူငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း။ ဒီပရိုဂရမ်ကအတွင်းကွန်ယက်ပြင်ပကနေသုံးလို့ရလားဆိုတာသိချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုငါလိုက်ခဲ့ပြီ၊ ငါဆာဗာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အပြင်ကနေဘယ်လိုဝင်ရမှန်းငါမသိဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်။ သင်၏ router / firewall တွင် port-forwarding မပါ ၀ င်သောကြောင့်သင် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။
မည်သည့် port ကိုဖွင့်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင် port ဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါ။ မင်းငါ့ကိုပြောချင်တာလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါက 80 လို့ထင်တယ်၊ မင်းရဲ့ server ကိုပုံသေ IP ပေးရမယ်။
ဒီမှာ Joomla ကို install လုပ်ပြီး Owncloud က run နိုင်သလား။
Joomla ကို upload လုပ်နိုင်ပြီး owncloud ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း LINUXERS၊ ငါကောင်းပြီ၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်၊ ငါ့ရဲ့ဆာဗာကိုအင်တာနက်ပေါ်ရောက်အောင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုက DHCP မှာရှိနေတယ်။ အရာရာတိုင်းကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါ့ရဲ့ဆာဗာကိုရုံးခန်းထဲမှာတင်တယ်။ ပြုပြင်မှုများတွင်တူညီသော interface မှပြောင်းလဲနိုင်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ အများဆုံး upload file အရွယ်သည် ၂ GB သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် yuca veracruz မှနှုတ်ခွန်းဆက်သသည့်ရုပ်ရှင်များအထိဖြစ်သည်။
အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေအံ့သြဖွယ် post ကို။
android အတွက် OwnCloud application ရှိသလား။
မင်းရဲ့ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပို့ပေးပါ။
။ ။ Francisco B
ဖာနန်ဒို VA သို့ ဟုသူကပြောသည်
ကြည့်ကြရအောင်၊ ငါ ၀ င်ပြီးသည်အထိအရာရာဟာမှန်ကန်တဲ့အရာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ် http://localhost/owncloudငါ index.php ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ်။ ဖွင့်မယ့်အစား mozilla၊ chrome နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီကနေဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
ဖာနန်ဒို VA သို့တုံ့ပြန်ပါ
သင်၏ဆာဗာတွင် PHP5 ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်သင်၏ Apache နှင့် Nginx နှင့်မချိတ်ဆက်သောကြောင့်၎င်းသည် server သည် .php ကိုမလုပ်ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖာနန်ဒို ဂါစီယာ ဂူယ်လ် ဟုသူကပြောသည်
ငါကအသစ်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​terminal ကိုထုတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမတတ်နိုင်ဘူး၊ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား
FERNANDO GARCIA GUEL သို့ပြန်ပြောပါ
MySQL / MariaDB အသုံးပြုသူအမည်နှင့် / သို့မဟုတ်စကားဝှက်မမှန်ပါ။ သင်ရှိပြီးသားအကောင့် (သို့) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
Jose Dorado သို့ပြန်သွားပါ
ငါ owncloud ကိုတစ်နှစ်သုံးပြီးအရာအားလုံးဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ 15 ထဲကဖိုလ်ဒါနှစ်ခုကိုသာသုံးတဲ့အခြားသုံးစွဲသူတစ်ယောက်ကိုငါဖန်တီးဖို့လိုအပ်တယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ငါ့မှာကိုယ်ပိုင်အသံ 6
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ no-ip ကို owncloud တွင်ထည့်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါက ubuntu 14.04 တွင် owncloud ဖြင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
NO-IP နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကို router တွင် configure လုပ်ပြီး port 443 ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင် owncloud ရှိသည့်စက်ထဲသို့ forward (router) သို့ forwarding ထပ်ထည့်သည်။
ဒိုမိန်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်ထပ်ထည့်သည် (အမှု ၁ တွင်၊ 1 ကပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သည်)
1 => 'domain-no-ip'၊
apache ကို restart လုပ်လိုက်ပြီ။ ဒါကိုအခုအောက်ပါအတိုင်းရယူနိုင်သည်။
Android အတွက် "ocloud for owncloud" ပရိုဂရမ်ကိုသုံးသည်။
ငါ Debian ကိုသုံးတယ်။ ငါသည်လည်း Mysql ကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဖိုင်တွဲများကိုတင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းဟေ့၊ လာမည်
ဗလာဒီမာ ကမ်ပိုစ် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အသစ်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်cloudကိုတပ်ဆင်ပြီးပြီးပါပြီ။ အရာအားလုံးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် chat ကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ကျွန်ုပ် youtube ၌တွေ့သောဤလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာသည် - https://youtu.be/At9obC0Vp5Aငါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Vladimir Campos ကိုပြန်ပြောပါ
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်ဆာဗာလည်ပတ်နေသည့်နေရာနှင့်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သို့သိုလှောင်ရန်နေရာ ၅၁၀ mB မှတိုး။ မရပါ။ php.ini ဖိုင်ကို 513G သို့ပြောင်းသော်လည်းပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ ငါအဖြေမျှော်လင့်ပါတယ်အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. !!!
DebianLight, KDM အတွက်အခင်းအကျင်း (ယခင် KubuntuLight ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း)